दार्जिलिङकी साहित्यकारलाई डम्बरकुमारी–गणेश आख्यान पुरस्कार
खबर पूर्वाञ्चल, ३० जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०९:३०
काठमाडौं, ३० जेठ । डम्बरकुमारी–गणेश साहित्य प्रतिष्ठान काठमाडौंले यो वर्षको ‘डम्बरकुमारी–गणेश आख्यान’ पुरस्कार दाजिर्लिङकी साहित्यकार आख्यानकार एवं समालोचक डा. वीणा हाङ्खिमलाई समर्पण गरेको छ ।
वरिष्ठ कथाकार माया ठकुरीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उक्त कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि रहेका प्रा. डा . गोविन्दराज भट्टराईले पुरस्कृत व्यक्तिको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । आख्यानका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिनुहुने साहित्य साधकलाई यो आख्यान पुरस्कार दिइने कुरा प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष मन्दिरा मधुश्रीले बताइन् ।
१५ हजार १ सय रुपैयाँ राशिको उक्त पुरस्कार समावेशी तरिकाले एकपटक पुरुष आख्यानकार र अर्कोपटक महिला आख्यानकारलाई समर्पण गरिने अध्यक्ष मधुश्रीले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो वर्ष जेठ २७ गते साहित्यकारसमेत रहनुभएकी प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष मधुश्रीका मातापिताको ६१ औ वैवाहिक वर्ष उत्सवको अवसर पारेर प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो । सोही दिन डम्बरकुमारी–गणेश आख्यान पुरस्कारको पनि घोषणा भएको थियो । र, त्यही दिन नै पहिलोपटकको पुरस्कार वितरण पनि गरिएको थियो ।
पहिलो पटक ‘डम्बरकुमारी–गणेश आख्यान पुरस्कार’ आख्यानकार तथा समालोचक नेपाली साहित्यिका धरोहर प्रा. मोहनराज शर्मालाई प्रदान गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष तथा कथाकार मधुश्रीको कथासंग्रह बुधनको घोडीमाथि कवि तथा उपन्यासकार, पत्रकार रेशम बिरही पाठकीय टिप्पणी र समालोचक डा. रजनी ढकालले समालोचकीय टिप्पणी गरेका थिए ।
१० चैत्र २०७४, शनिबार १९:१४
कतैबाट सहयाेग नहुँदा निर्मलाकाे बलात्कारी पहिचान गर्न सकिएन’ प्रधानमन्त्रीको दुखेसो
२३ आश्विन २०७५, मंगलवार ०८:०८
१८ असार २०७५, सोमबार ०७:५१
एमाले पत्रकारले एमालेकै समाचार वहिस्कार गर्ने
११ पुष २०७३, सोमबार १५:३६